Faallo: Xukuumadda Puntland ee Dr.Gaas oo lagu tilmaamey tii Dhalinyarada! • Horseed Media
You are here: Home / Featured / Faallo: Xukuumadda Puntland ee Dr.Gaas oo lagu tilmaamey tii Dhalinyarada!
Faallo: Xukuumadda Puntland ee Dr.Gaas oo lagu tilmaamey tii Dhalinyarada!
January 29, 2014 - By: Hanad Askar
Agaasimaha madaxtooyada Dr.Deeq Suleyman oo akhrinaya liiska Wasiirada
Madaxweynaha Dowladda Soomaaliyeed ee Puntland Dr.Cabdiweli Cali Gaas ayaa daaha ka qaadey golaha xukuumaddiisa, Golaha Wasiirada ayaa ka kooban 47, inkasta oo Wasiirka Warfaafinta gadaal laga soo magacaabayo laakiin Wasaaraddu ay ka mid tahay kuwa la magacaabey.
Waxay dhahaan “Caado laga tagaa carro Alle bay leedahaye” waa wax adag in xaaladaha dadku qabatimey si fudud lagu beddelo, Madaxweynaha Puntland ayaa ballan qaadey in uu dhisayo Xukuumad u eg Puntland waxaana ujeedadu ahayd mid dadka oo dhan iska dhex arki karo, maadaama miiska siyaasadda sida wax loogu qaybsadaa ay tahay hab beeleed, oo an la joogin xilligii aqoonta iyo kartida keliya ay shaqeynyso.
Golaha Xukuumadda ee Prof.Gaas soo dhisey ayaa la dhihi karaa waxaa ay u badan yihiin dookh wanaagsan kuwaas oo karti iyo aqoonba u leh in ay hoggaamiyaan halka loo igmadey.
Tirada Golaha Wasiiradda
Tirada Wasiiradu waa badan yihiin laakiin sida ay u badan yihiin ma ahan kuwo tayo ahaan u liita marka la eego qaar badan oo ka mid ah shaqooyinka ay soo qabteen ama sooyaalkooda. Golaha Xukuumada uu hadda soo dhisay Prof.Gaas ayaa xoogaa ka yar tiro ahaan tii ugu danbeysay ee Faroole oo gaareysay 62 xubnood.
Waxyaabaha xiisaha leh ee Xukuumadaan waxaa ka mid ah in ay ku jiraan Wasiiru Dowlayaal ka soo jeeda Beelaha Absame iyo Sade taas oo ah mid aan horey Puntland uga dhicin, isla markaana ka dhigeysa in Puntland gashey weji cusub.
Xukuumaddan cusub ayaa la dhihi karaa waa markii u horeysey oo haweenku ay ku yeeshaan door muuqda waxaana ay isku dar Golaha Wasiirada ku yeesheen 5 Wasiir oo labo ka mid ah ay yihiin Wasiiro buuxa. Waxaa muuqata in Prof.Gaas kasoo baxay balanqaadkiisii ahaa inuu Haweenka siin doono shan xubnood oo ka tirsan golaha Wasiirada.
Sahra Siciid Nuur Wasiirka Dastuurka Arrimaha federaalka iyo Dimoqraadiyadda
Wasiirka Dasuurka Arrimaha federaalka iyo Dimoqraadiyeynta ayaa Madaxweynuhu u wakiishey gabadh aqoon yahan ah leh khibrad ay shaqadeeda ku gudan karto waa Sahra Siciid Nuur, waxay horey madax uga soo noqotey hay’adda Islamic Releif ee Puntland waxay ka soo shaqeysey, Arrimaha Bini’aadanimada sida Human Rights.
Anisa Xaaji Mumin Wasiirka Haweenka iyo Arrimaha Qoyska
Anisa Xaaji Muumin oo ah gabadh dhalinyaro ah oo u dhaq-dhaqaaqda arrimaha waxbarashada caruurta iyo xoojinta haweenka oo degan Minnasota ayaa loo magacaabey Wasaaradda haweenka iyo Arrimaha qoyska, halka saddex gabdhood oo kale wasaaro aan culeys yarayn looga dhigey Wasiiro ku-xigeeno.
Xukuumadda Prof. Gaas waxaa ka soo dhex-muuqdey laba kamid ah Madaxweynayaashii maamulka Khaatumo kuwaas oo tiradooda guud ay ahaayeen saddex hab kaltan ah xilka ula kala wareegaayey, waxaana Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Dowladaha Hoose loo igmadey Axmed Cismaan Cilmi (Axmed Karaash) halka Wasiirka Kaluumeysiga iyo Kheyraadka Badda loo magacaabey Cabdinuur Biindhe oo isagu Wasiir ka ahaan jirey Xukuumadihii Cabdullaahi Yusuf, Maxamed Casbdix Xashi iyo Gen.Cadde Muuse, Biindhe ayaa waayahan saldhigiisu ahaa magaalada Boocame waxaana uu ahaa Madaxweynayaasha kaltanka ah ee Khaatumo.
Dr.Cabdiweli Cali Gaas oo ballan qaadey in shaqada horeysa ee uu qabanayo ay tahay shir Khaatumo loo qabto oo lagu xalinaayo wixii khaldamey ayaa la dhihi karaa waxa uu hadda haystaa fursad weyn oo lagu xalin karo wixii khaldamey, maadaama xukuumadiisa ay ka mid yihiin xubno xog-ogaal u ah khaladaadka la galay.
Xukuumadda cusub ee Puntland ayaa waxaa si weyn ugu badan dhalinyarada, gaar ahaan marka la eego Wsiir kuxigeenada iyo weliba qaar kamid ah Golaha Wasiirada, sida Anisa Xaaji, Guuleed Axmed Yaasiin iyo qaar kale oo badan, kuwaas oo ah dhiig fir-fircoon oo dalku u baahan yahay, Sida la isku raacsan yahay waa Xukuumaddii ay ugu badnaayeen dhalinyaradu waxaana ay ka mid ahayd ballan qaadkii Madaxweyne Cabdiweli Cali Gaas.
Sida muuqata Madaxweynaha Puntland waa uu ka dhabeeyey inuu sameyn doono isbedal balaaran oo dhanka Golaha Wasiiradda ah isagoo aan soo celin Wasiiradii xukuumadihii hore oo in badan oo kamid ah loolan xoogan ugu jiray inay markale iska dhex arkaan xukuumadda, waxayna qaarkood taageero ka heysteen beelaha ay kasoo jeedaan, arrintaasi oo culeys weyn lagu saaray Prof.Gaas, walow markii uu danbe uu soo magacaabay xubno intooda badan cusub.
Raqba waa ku rageed Xukuumadda cusub wax dhaliil ah maanta looma hayo, waxaase taarikhdu ay kala saari doontaa midkasta dalka waxa uu u qabto iyo dhaxalka uu ka tago, magaalo maa madal inta joogtana waa markhanti Al-miidaan waasac.